LG G2 ကို Android 7.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း။ (မော်ဒယ် D802) | Androidsis
ရက်အနည်းငယ်အကြာကသင်တို့ကိုငါသင်ပေးတယ် Samsung Galaxy S3 ကို android 7.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ယခုတွင်မီးဘေးဒဏ်ခံနိုင်သော LG G2 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်လ်သို့မဟုတ်မော်ဒယ် D802 ၏အလှည့်သည်လူများစွာအတွက် LG ဖန်တီးခဲ့သောအကောင်းဆုံး Android စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဒီနေ့ငါမင်းကိုသင်ပြတော့မယ် LG G2 D802 ကို Android 7.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်ပါ တရား ၀ င်တရားဝင်မဟုတ်ပဲ LinageOS 14.1 (သို့) Cyanogenmod 14.1 ၏ဆက်နွယ်မှုကဘာလဲ။
ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ Roms ဟာကွယ်လွန်သွားပြီလို့ဘယ်သူပြောခဲ့သလဲ။ ဒါ့အပြင် LG G2 ဟာအတိတ်က terminal တစ်ခုလို့ထင်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဒီ post ကိုကျွန်တော်စတင်လိုက်တဲ့ပူးတွဲဗီဒီယိုမှာပြတဲ့အခါငါတို့မြင်ရပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ LG G2 သည်နောက်ဆုံးပေါ် Android ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကို LinageOS မှမည်မျှကောင်းကောင်းရွှေ့နိုင်ပါသလဲ?.
ငါသည်ဤလိုင်းများအထက်တွင်သင်တို့ကိုငါစွန့်ခွာသောဗီဒီယိုတွင်, Android 7.1.1 ငါ၏အ LG က G2 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်သို့မဟုတ်မော်ဒယ် D802 ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းသင်ပြအပြင်, ငါသည်လည်းသင်ငါတို့လိုအပ်သောဖိုင်များကို flashing ၏နည်းလမ်းကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီပြသ ဦး ဆောင်လမ်းပြရန်သွားကြသည် LG G2 ကို Android 7.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်ပါ .
သင်၏ LG G2 ကို Android 7.1.1 သို့ update လုပ်ရန်၊ ပြုပြင်ထားသော TWRP (သို့) ပြန်လည်ဆယ်တင်ရေးမှသည် LG G2 ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ထိလုပ်နိုင်ရန်သင်သိထားသင့်သမျှကိုရှင်းပြပါလိမ့်မည်။ ပထမဆုံးဖြန့်ချိတဲ့နေ့မှာကြီးမားတဲ့ကွာခြားချက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟာအခုထိ Android ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဖြစ်သည့်နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ပြောင်းလဲသွားမှာပါ။
1 LG G2 D802 ကို Android 7.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ
2 LG G2 D802 ကို Android 7.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များ
3 LG G2 D802 ကို Android 7.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း။ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နည်းလမ်း။
LG G2 D802 ကို Android 7.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ
ဆိပ်ကမ်းရှိတယ် LG G2 အမျိုးအစား D802, အသစ်ပြုပြင်ထားသော TWRP Recovery ကို root လုပ်ပြီးသည် ရရှိနိုင်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းရန်
တစ်ဦးရှိ backup EFS ဖိုင်တွဲ လိုလိုမယ်မယ်။
တစ်ဦးရှိ စနစ်တပြင်လုံး၏ nandroid backup အမှု၌ကျွန်ုပ်တို့သည် Rom ၏ flash လုပ်ငန်းစဉ်မတိုင်မီကဲ့သို့အရာအားလုံးထားခဲ့ဖို့ဆင်းပြန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်အချက်အလက်အားလုံးကိုအရန်ကူးထားပါ flash ဖြစ်စဉ်ကတည်းကကျနော်တို့ပေမယ့်သူတို့ကိုအားလုံးဖျက်ပစ်သွားကြသည် ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသန့်ရှင်း install လုပ်ဖို့အကြံပြုပါသည် ခြစ်ရာကနေ
ရှိသည် USB debugging လုပ်ထားပါတယ် developer settings ကိုမှ။
100 x 100 ဘက်ထရီကိုအားသွင်းပါ။
LG G2 D802 ကို Android 7.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များ
၎င်း၏ဗားရှင်း 3.0.2.1 အတွက် TWRP ဒီကနေ download လုပ်ပါ.
download လုပ်ပါ Rom lineage-14.1-20170101-UNOFFICIAL-d802.zip ဒီ link ကနေ
Gapps Android 7.1 ကို download လုပ်ပါ, အကြံပြု nano သို့မဟုတ်မိုက်ခရို။ ဒီမှာအားလုံးဗားရှင်း ARM + Android 7.1 ကိုရွေးရန်သတိရပါ.
လိုအပ်သောဖိုင် (၃) ခုကို download လုပ်ပြီးသည်နှင့် LG G2 ၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်တွင် (သို့) OTG မှတစ်ဆင့်ပြင်ပတွင်တပ်ဆင်ရန်အတွက် Pendrive တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် decompress မလုပ်ပဲကျွန်ုပ်တို့ကော်ပီကူးသည်။ ပြီးတော့ကျနော်တို့စာကိုဒီအဆင့်တွေကိုလိုက်နာ:
LG G2 D802 ကို Android 7.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း။ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နည်းလမ်း။
ငါနောက်ကိုလိုက်ရန်လိုက်နာရန်အဆင့်များဖတ်နေအပြင်ကအကြံပြုသည် LG G2 D802 ကို Android 7.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်ပါဒီလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာအစမှာသင့်ကိုငါထားခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်အကြံပြုသည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်အားအရာအားလုံးကိုတစ်ဆင့်ချင်းနှင့်အစစ်အမှန်အချိန်တွင်ဖော်ပြသည်။
ကျနော်တို့ Recovery mode ကိုဝင်နှင့် ကျနော်တို့ TWRP Recovery ကို၎င်း၏နောက်ဆုံး version ကို update လုပ်တယ် Install option ကိုသာနှိပ်ပြီးယခင် downloaded zip ကိုရွေးချယ်ပါ။
ရဲ့ option ကိုသွားကြကုန်အံ့ reboot ပြီးတော့ငါတို့ရွေးလိုက်တယ် reboot Recovery ကို.
ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ သုတ် o သန့်ရှင်းသော ကိုနှိပ်ပါ အဆင့်မြင့်သန့်ရှင်းရေး y Rom နှင့် Gapps မှိတ်ရန်ဖိုင်များရှိသောလမ်းကြောင်း မှလွဲ၍ ရွေးချယ်စရာများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည်.
ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ Install o install y ပထမ ဦး ဆုံး Rom ၏ zip ကိုရှေးခယျြပွီး Gapps ၏ zip ကိုရွေးပါ သို့မဟုတ်မူလဇာတိဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းများ၊ အစဉ်အမြဲထိုအစဉ်အလာအတိုင်းပထမ ဦး ဆုံး Rom LinageOS zip ကိုရွေးပြီးနောက် Gapps Zip ကိုရွေးချယ်ပါ။
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည် option ကိုရွေးပါ Cache & Dalvik ကိုသုတ်ပါ o Cache နှင့် Dalvik သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှောဘားကိုနောက်တစ်ခါရွှေ့။ ပြီးဆုံးသောအခါရွေးစရာကိုရွေးပါ System ကို Reboot လုပ်ပါ.
ဒီနှင့်အတူသင်ပြီးသား၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာဖြစ်လိမ့်မည် သင်၏ LG G2 model D802 ကိုနောက်ဆုံးပေါ် Android နှင့်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဖြင့်ခံစားပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » ရွမ် » LG G2 ကို Android 7.1.1 သို့မွမ်းမံနည်း။ (မော်ဒယ် D802)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Francisco ။ ငါကစမ်းသပ်ဆိုင်းငံ့ရှိသည်ဖို့ကနိမ့်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ
သင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် rootroot မှတဆင့်အမြစ်တွယ်နေခြင်းပြaနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်လျှင်သင်သိသလား
Hello efs folder ရှိတယ် ... root explorer, root browser နဲ့အတူငါရှာပြီ၊ အမြစ်ဖြစ်၏ အာဂျင်တီးနားကနေအဖြေရဖို့စောင့်နေတယ်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
ငါဆဲလ်ဖုန်းမှာများစွာသောအမှုအရာလုပ်ခဲ့တယ်သည့်အခါတစ် ဦး S3 ကိုယခင်ကငါ efs folder ကို၏ backup လုပ်ထားလုပ်စရာမလိုဘဲလုပ်ခဲ့တယ် ... ။ နှင့်အရာအားလုံးဆယ်ထဲကအလုပ်လုပ်ခဲ့ !!
ထိုဖိုင်တွဲကိုအရံမသိမ်းဆည်းဘဲကျွန်ုပ်၏ lg တွင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ငါ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပြီး lg g2 d802 မှာအံ့ works စရာကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ငါပြောချင်တယ်။ ငါအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့စက်ရုံမှအမြန်ဝေးလံသောလျှောက်လွှာကိုဘယ်မှာရနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးချင်ခဲ့တယ်။ ငါအဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းတယ် အားလုံးစတင်ခြေလှမ်းများကိုအောက်ပါစနစ်စတင်ခဲ့ဘူး။ LG လိုဂိုမှထွက်ခွာပြီးနောက်အနက်ရောင် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာပြီးဘာကိုမှမလုပ်ခဲ့ပါ။ ဖြေရှင်းနည်းမှာ CAF BootStack ကို download လုပ်ရန်ဖြစ်သည် https://forum.xda-developers.com/lg-g2/development/boot-g2-hybrid-bootstacks-t3183219 ရှင်းလင်းပါ၊ bootstack ကိုထည့်ပါ၊ သင်လမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ROM နှင့် GApps ကိုထည့်ပါ။ အဲ့ဒီနည်းကကျွန်တော့်အတွက်ပြaနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ!
Jose Manuel Martinez Salvador ဟုသူကပြောသည်
ငါနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်သင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းငါ recovery မလုပ်နိုင်ဘူး
Jose Manuel Martinez Salvador အားပြန်ကြားပါ
Hello, ငါအမြန်ဝေးကွာသော Q လျှောက်လွှာစက်ရုံမှလာနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်, ငါဘယ်မှာငါချနိုင်သလား, အိုင်တီထည့်သွင်း ???? ။ ငါအဖြေကိုစောင့်ပါ !!
ZAZA REMOTE.APK နှင့်အတူစမ်းသပ်
စန္ဒီ cordovi ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အကူအညီလိုအပ်ပါတယ် ပြproblemနာကကျွန်ုပ် lg g2 d802 ကိုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားခြင်းမှာ၊ restart လုပ်ပြီးသည်နှင့်, lg logo ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးအားလုံးကျန်ပါတော့သည်။ မိုဘိုင်းသည်အဖွင့်အပိတ်မပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည် operating system ကိုမြှင့ ်၍ မရပါကအဖြေများကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးစောင့်ဆိုင်းပါ။ ကျွန်ုပ်လုံးဝကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
Sandy cordovi သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်သည် Sandy Cordovi ကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ငါ "Wipe Cache & Dalvik သို့မဟုတ် Cache သန့်ရှင်းရေးနှင့် Dalvik" ၏လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းခြေလှမ်းကိုမေ့လျော့ခဲ့ပြီးဖုန်းသည်ဘဝ၏လက္ခဏာမပြပါ။
Juan လူးဝစ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ Francisco၊ မေးခွန်းတစ်ခု (ဒီဆောင်းပါးကိုအချိန်နှင့်အမျှသင်အချိန်မရွေးလေ့လာနေလျှင်) ။
မင်းရဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကြံပြုချက်တွေ (ငါသြဂုတ်လမှာ Lineage ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးသတင်းကိုသာ install လုပ်ခဲ့မှသာ) ကငါ့ရဲ့ LG2 ရဲ့ Root ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကတကယ်ကိုကောင်းတယ်၊ ငါမင်းကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏မေးမြန်းချက်မှာ - ကျွန်ုပ်သည်အသစ်ပြောင်းလဲခြင်း (ကျွန်ုပ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်) ကိုပြုလုပ်သလား၊ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အသစ်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးသွင်းထားသည့်အချိန်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
Juan Luis အားပြန်ပြောပါ
ဟိုဆေး Atay ဟုသူကပြောသည်
Jose Atay အားပြန်ပြောပါ
ဘက်ထရီချွေတာနိုင်အောင် Android Launcher တစ်ခု